China Acrylic advertising simba rinoponesa chiedza bhokisi zviratidzo vagadziri uye vatengesi |Zhengcheng
Sarudza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvakagadzirwa nevagadziri, kudzora mhando, yepamusoro-yekupedzisira uye inoyevedza zviratidzo, uye gadzira mufananidzo wakanaka.
Zita rechigadzirwa: Acrylic advertising simba rekuchengetedza chiedza mabhokisi zviratidzo
1. Mutengo wekutanga wekudyara kugadzira zvikwangwani zvemazuva ese wakadzikira, nekuti masaini mabhodhi aya anowanzo gadzirwa nemapaneru e acrylic akadzokororwa.Nekudaro, mapaneru achapera, deform, dent uye mamwe matambudziko mukati me3 kusvika 5 mwedzi, izvo zvinopfupisa zvakanyanya hupenyu hwebasa rechiratidzo.
2. Mukugadzirwa kwemabhokisi emagetsi echinyakare, chloroform dilute glue inowanzoshandiswa kubatanidza swatches uye mapaneru.Kuita kwekuisa chisimbiso hakuna simba, uye kunokanganisa kusimba kwetembiricha uye zvinhu zvinofamba zvichikonzera kutsemuka.Guruva netsvina zvinounganidza zviri nyore pamaswachi uye mapaneru mushure mekugezwa nemvura.Naizvozvo, guruva netsvina hazvigone kucheneswa, uye zvinokanganisa kupenya kwechikwangwani pamwe nekukuvadza kutaridzika kwechikwangwani.
3. Mabhokisi emwenje echinyakare anonyanya kugadziriswa maererano ne-on-saiti zviyero.Kana chitoro chikafamba, mwero wekushandiswa kwemasaini wepakutanga uri pasi pe5%.
Matambudziko anogadziriswa nezhengcheng
1. Adopt Japanese imported acrylic board, kugadzikana kwepamusoro, nzvimbo yakatsetseka uye kutakura chiedza chakasimba.Kana ichishandiswa ne LED machubhu, chiedza chakafanana.Panguva imwecheteyo, chinyorwa ichi chinopesana nemirairo ye ultraviolet, haisi nyore kupera, haisi nyore kukanganisa, uye ine hupenyu hurefu hwebasa.
2. Zhengcheng's light box signboard inosanganiswa nemabhokisi emwenje akawanda, ari nyore kuisa.Pamusoro pezvo, inogona zvakare kuiswa zvakare uye kushandiswa zvakare mushure mekunge chitoro chatamiswa.
Zvakapfuura: Chikwangwani chekunze chakavhenekerwa chegirosari
Zvinotevera: Yakareruka chitoro chitoro pamberi signboard yeYonghui
Vacuum Kugadzira Chiedza Bhokisi Signboard, Kunze Kwechiedza Bhokisi Signboard, Blister Chiedza Bhokisi Signboard, Zviratidzo Zvakavhenekerwa, Pharmacy Signboard, Supermarket Signboard,